အကူညီလိုအပ်နေတဲ့ မြန်မာ ကလေးများအတွက် နယူးယောက်မှာ ပျ ံ့လွှင့်ခဲ့တဲ့ ဂီတသံစဉ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » အကူညီလိုအပ်နေတဲ့ မြန်မာ ကလေးများအတွက် နယူးယောက်မှာ ပျ ံ့လွှင့်ခဲ့တဲ့ ဂီတသံစဉ်
အကူညီလိုအပ်နေတဲ့ မြန်မာ ကလေးများအတွက် နယူးယောက်မှာ ပျ ံ့လွှင့်ခဲ့တဲ့ ဂီတသံစဉ်
ခြောက်ကြိမ်မြောက် ဂီတရံပုံငွေပွဲ (နယူးယောက်) photo: 3hird Medium
တေးသီချင်းတွေ ကို ဆိုတီးပြီး မြန်မာကလေးငယ်တွေ အတွက် ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကတည်းက ရံပုံငွေ ရှာပေးနေတဲ့ နယူးယောက်အခြေစိုက် 3hird Medium တီးဝိုင်း ရဲ့ခြောက်ကြိမ်မြောက် ဂီတပွဲ ကို စက်တင်ဘာ ၂ရ ရက်နေ့က၊ နယူးယောက်မြို ့ရှိ Walter Crowley Intermediate School မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ ဂီတပွဲ မှာ 3hird Medium ဝိုင်းတော်သားတွေ နဲ ့အတူ အဆိုတော် ခင်ဘုဏ်း ကလည်း ပါဝင်သီဆိုခဲ့ပြီး၊ နယူးယောက်ရှိ မြန်မာမိသားစုများက မြန်မာရိုးရာအစားအစာများ ကို ပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြတယ်။ ဂီတဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ်အတွင်းမှာ ထိုင်ခုံတွေ မလောက်ပဲ၊ ရုံပြည့်လျှံတဲ့ အထိ အားပေးမှုကို ရခဲ့ပြီး၊ အလှူငွေ ဒေါ်လာ ၂သောင်းငါးထောင်ကျော် ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
တီးဝိုင်းစတင်ဖွဲ ့စည်းခဲ့ချိန်က စပြီး ခုချိန်အထိ မြန်မာပြည်တွင်း နဲ့နယ်စပ်ဒေသက ဒုက္ခသည်စခန်းတွေ မှာ နေထိုင်နေတဲ့ ကလေးတွေ အတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ တစ်သိန်းကျော်ခန့်ပေးပို့လှူဒါန်းနိုင်ခဲ့တဲ့ 3hird Medium တီးဝိုင်းရဲ ့မန်နေဂျာ ကိုရဲ နဲ့ခနတာ စကားပြောဖြစ်ခဲ့ရာမှာ ….
အဖွဲ ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံ အကျဉ်းရုံးပြောပြပါလား။
၂၀၀၈ ခုနှစ်တုန်းက ဂီတကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ လူငယ် ၃ဦး ကြောင့် ဒီအဖွဲ ့ကို စဖွဲ့ဖြစ်သွားတာပါ။ ဒရမ်မာ ကိုညီ၊ လစ်(ဒ်) စိုးချမ်း (အခုမြန်မာပြည်မှာ စီးရီးထုတ်၊ ဗီဒိယိုရိုက်နေတဲ့ ဈာန်) နဲ့ဘေ့စ်တီးတဲ့ နန္ဒ တို ့က အပျော်တမ်းတီးဝိုင်းဖွဲ ့ရာကနေ၊ မြန်မာပြည် အတွက် အကျိုးရှိတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုခု လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ကျွန်တော် တို့စလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ အဖွဲ ့ဝင်တွေ ထပ်စုပြီး၊ တီးဝိုင်းထောင်ဖို ့လိုအပ်တဲ့ ဂီတပစ္စည်းတွေကို ဝယ်ထည့်၊ နယူးယောက်က မြန်မာမိသားစုတွေ ကလည်း အစားသောက်တွေ ဝိုင်းလှူနဲ့ကျွန်တော်တို ့စပြီး ဂီတပွဲတွေ စလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
မြန်မာပြည်တွင်း က လိုအပ်နေတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးထဲမှာ ဘာဖြစ်လို ့မိဘမဲ့ ကလေးတွေ ကို ကူညီဖို ့ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပါသလဲ။
ဟုတ်ကဲ့။ ၂၀၀၈-၂၀၀၉ ဝန်းကျင်တုန်းက အခုလို မပွင့်လင်းသေးတော့ ပြည်တွင်း ကို အလှူငွေပို ့ဖို ့နဲနဲ အခက်ခဲရှိပါတယ်။ လှူရမယ့်နေရာတွေ အများကြီးထဲမှာ မိဘမဲ့ ကလေးတွေကြတော့ မိဘမေတ္တာကို မရကြဘူး၊ တချို ့ကလဲ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ်ကြောင့် မိဘမဲ့ဖြစ်သွားတာတွေ ရှိတယ်၊ စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ အပြင်၊ ပညာလဲ မသင်နိုင်ကြဘူး။ အစိုးရဘက်က ထောက်ပံ့နိုင်တာလဲ နည်းတယ်။ ဒါကြောင့် မိဘမဲ့ကလေးတွေ ကိုပဲ အဓိက လှူဖို ့ကျွန်တော်တို ့ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ နောက်တော့ မိဘမဲ့မှ မဟုတ်ပဲ တခြား အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ ကလေးတွေကို ပါ ကူညီဖြစ်သွားတယ်။
ဒီလို တနိုင် ကြက်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်း ကို အစပျိုးပေးပါတယ်။
• ဒီခြောက်နှစ်တာ ကာလအတွင်း လှုပ်ရှားဖြစ်ခဲ့တာတွေ ပြောပြပါလား။
နယူးယောက်မှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ ့ဝင်တွေက အလှူငွေရှာပေးပြီး၊ ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တွေနဲ့လုပ်အားပေးသူတွေ က အလှူပစ္စည်းတွေ ကို လိုအပ်တဲ့ နေရာ တွေကို သွားရောက်လှူဒါန်းပေးပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို ့ပေါ်နဲ ့အနီးတဝိုက် ဖြစ်တဲ့ မှော်ဘီ၊ ပေါင်းတည်၊ ဧရာဝတီတိုင်းက နာဂစ်မုန်တိုင်းသင့် ဒေသတွေ၊ ကချင်ပြည်နယ် က IDP camp သုံးခု၊ နယ်စပ်ဒေသ မဲဆောက် က ဒုက္ခသည် စခန်းတွေ အထိ ကျွန်တော်တို ့ရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Transparency က အရေးကြီးတဲ့ အတွက် အလှူ လက်ခံရရှိကြောင်း ဓာတ်ပုံ အထောက်အထားနဲ့လက်မှတ်ထိုးပေးတဲ့ စာရွှက်တွေ ကို ယူပြီး ဒီဘက်က အလှူရှင်တွေ ကို ပြန်ပြီး ရှင်းတမ်းထုတ်ပါတယ်။
လှူတဲ့နေရာမှာ ငွေသားကို တိုက်ရိုက်ပေးလှူတာမျိုးထက်၊ တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ ပိုလှူဖြစ်တယ်။ စာသင်ကျောင်း ဆောက်ပေးတာမျိုး၊ ကျောင်းအတွက် လိုအပ်တဲ့ မီးစက်၊ ကွန်ပျူတာ၊ ပရိဘောဂ နဲ ့ကျောင်းသုံး ပစ္စည်းတွေ၊ အစားအစာ နဲ့ဆေးဝါးတွေ ပါသလို၊ ရေရှည်မှာ ကလေးတွေ သူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ရပ်တည်နို်င်အောင် တနိုင်လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ မှိုစိုက်ပျိုးရေး၊ကြက်မွေး မြူရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ ဆိုက်ကားတွေ နဲ့အမျိုးသမီးကျောင်း မှာ ဆို စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ စသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နို်င်အောင် မ တည် ပေးပါတယ်။ နောက်ပြီး ခွဲစိပ်ကုသမှု အရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့ ကလေးတွေ အတွက် ကုန်ကျစားရိတ်လှူပေးပါတယ်။
မိဘမဲ ့မိန်းကလေးတွေ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုနို်င်အောင် တနို်င် စက်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေ မ တည်ပေးတယ်။
• ဘယ်လို အခက်အခဲတွေနဲ ့ရင်ဆိုင်ရသလဲ။
ကျွန်တော်တို ့အလှူပေးပို ့တဲ့ နေရာက ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ သီလရှင်ကျောင်း၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ မသန်မစွမ်းကျောင်းတွေ ကအစ ဟိုး ဒုက္ခသည်စခန်းအထိ ဆိုတော့ လူပေါင်းစုံနဲ ့ဆက်ဆံရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို ့အဖွဲ ့က နေရာတစ်ခုတည်းကို လစဉ် ငွေတွေ ပို့နိုင်လောက်အောင် အင်အားမတောင့်သေးဘူး။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို ့ပို ့မယ့် အလှူငွေတွေ ကို စောင့်နေတာထက် ၊ သူတို ့ဘာသာ သူတို့ရပ်တည်ပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရှာနိုင်တဲ့ အနေထားမျိုးကို ကျွန်တော်တို ့ကလိုလားတယ်။ တနိုင်လုပ်ငန်းတွေ ကို လုပ်ဖို ့တိုက်တွန်းတော့ နောက်ကလိုက်လာပြီး အောင်မြင်သွားတဲ့ နေရာတွေ ရှိသလို၊ လိုက်မလုပ်ပဲ အလှူငွေပဲ စောင့်နေတဲ့ နေရာတွေလဲ ရှိပါတယ်။ ကလေးတွေ အတွက် မဟုတ်ပဲ တခြား (ဥပမာ၊ ဘုန်းကြီးတရားဟောရင် သုံးဖို ့စပီကာတွေ၊ စက်တွေ စသဖြင့်) အလှူခံတဲ့ အခါ ကျွန်တော်တို ့ဘက်က မလှူရင် စိတ်ဆိုး သွားတာမျိုးတွေလဲ ကြုံရပါတယ်။
• ရှေ ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေ အနေနဲ ့ဘာတွေ ဆက်လုပ်ဖို ့ရည်မှန်းထားသလဲ။
ကျွန်တော်တို ့အဖွဲ ့က နှစ်စဉ် ရံပုံငွေ ဂီတပွဲ တစ်ခုတည်းကို သာမက၊ မင်္ဂလာဆောင်တွေ ကျောင်းကပွဲတွေ က ငှားရင် လိုက်တီးပေးပြီး ရသမျှ ငွေ အားလုံးကို ပြန်လှူပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီလုပ်ငန်းမှာ ကျွန်တော်တို ့အဖွဲ ့ရဲ ့လုပ်ငန်းအဖြစ်နဲ ့မဟုတ်ပဲ နယူးယောက် မြန်မာမိသားစုတွေ ရဲ ့လှုပ်ရှားမှု အနေနဲ ့ဆက်ပြီးလုပ်သွားချင်တယ်။ မြန်မာပွဲတွေမှာ ဝင်ကြေးတွေက ဒေါ်လာ ၂၅ ကနေ အထက် ကောက်ခံတာ ရှိပေမယ့်၊ အခုပွဲမှာ ကျွန်တော်တို ့ဝင်ကြေးဒေါ်လာ ၁၅ ပဲ ကောက်ပြီး၊ အစားအစာ တွေကို မရောင်းပဲ အခမဲ့ကျွေးပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တော့ လူကြီး၊ လူငယ်မရွေး အားလုံးပါလာတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ ့ဆက်ပြီး မြန်မာ ကွန်မြူနတီနဲ ့အတူတကွ ပေါင်းပြီး လုပ်သွားဖို့ရည်မှန်းထားပါတယ်။
တဆက်တည်းမှာပင် ပွဲကြည့်ပရိသတ်တစ်ဦးကို မေးမြန်းတဲ့ အခါ
“ ဒီအဖွဲ ့ကလုပ်တဲ့ ပွဲအတွက် နှစ်တိုင်း စားစရာတွေ လှူဖြစ်တယ်။ သူတို ့ရဲ ့ဖေ့ဘွတ်မှာ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်း၊ သွားလှူဖြစ်တဲ့ နေရာတွေ ကို ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေ နဲ့တကွ ဖော်ပြထားပြီး၊ အလွယ်တကူကြည့်နိုင်တော့ စိတ်ကြည်နှူးရတယ်၊ နောက်နှစ်တွေမှာလဲ ဆက်ပြီး ပါဝင်လှူသွားဦးမှာပါ” လို ့ပြောပြသွားပါတယ်။
မြန်မာပြည်နဲ ့ဝေးတဲ့ နေရာကို ရောက်နေပေမယ့် ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အဆို၊အတီး ပညာ နဲ့ပြည်တွင်း က ကလေးငယ်တွေ ကို တလှည့်ပြန်ပြီး ကူညီနေတဲ့ လူငယ်တစ်စု ရဲ့မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားနဲ ့၊ ချိုမြိန်တဲ့ တေးဂီတသံစဉ်တွေ ဆက်လက်ပြီး ပျ ံ့လွှင့် နိုင်ပါစေလို ့။
ပါဝင်လှူဒါန်းလိုသူများအနေနဲ့http://www.3hirdmedium.net/ ကနေတဆင့် credit cards/ paypal နဲ ့လှူလို ့ရပါတယ်။
3hirdmedium ရဲ ့အကြောင်း ပိုမိုသိလိုရင် https://www.facebook.com/3hirdMedium
မွန်မြတ်တဲ့ စိတ်ထားနဲ ့၊
ဆက်လက်ပြီး ပျ ံ့လွင့် နိုင်ပါစေ။
.လေးစားချီးကျူ းမိပါတယ်ဗျာ…သာဓုသာဓုသာဓု ပါ
အခု ဒီဘက်နှစ်ပိုင်းတွေမှာ လူ ငယ်တွေ ဦးဆောင်တဲ့ ပရဟိတ လုပ်ငန်းလေးတွေ အများကြီးပေါ်ထွက်လို့လာပါတယ်။
ကောင်းသော အလား အလာ လို့ မြင်မိပါတယ်
မနောလည်း ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ဒီလို ကူညီပေးချင်နေမိပါတယ်။
ဝင်ငွေရှာပြီး လိုအပ်သူတွေကို လှူ ဒါန်းနိုင်တာ အားကျစရာပါပဲ။
ရေရှည်မှာ ကလေးတွေ သူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ရပ်တည်နို်င်အောင် တနိုင်လုပ်ငန်းတွေ ထူထောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းက အရမ်းကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အလွယ်ရရင် အလွယ်လိုက်တတ်တဲ့ မြန်မာ့ဓလေ့အတိုင်း ခွံ့ပေးမယ့် ထမင်းလုပ်ကိုချည်း မျှော်ကိုးတတ်တဲ့ စိတ်ကလေးတွေ ပြင်လာအောင် အသိပညာပေးမှုတွေ အများကြီး လုပ်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။
စိတ်ဓာတ်ပြု ပြင်ရေး အသိပညာပေးမှုတွေ လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ ပြောတာက……
လိုအပ်ရင် အလှူခံလိုက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လိုသမျှအလွယ်တကူ လာအလှူခံပြီး မလှူရင် စိတ်ဆိုးတတ်တဲ့သူတွေကိုပြောတာပါ။
တနိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ကူညီတာမျိုးကို ထောက်ခံအားပေးပါတယ်။
ပရိဟိတ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဖွဲ့ထားတဲ့အဖွဲ့လေးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်လေး ကောင်းမွန်တယ်ဗျာ။
ဒီတပတ် သတင်း zone ထဲ ထည့်ရေးခဲ့ပါသေးရဲ့။
ကလေးတွေ သူတို့ခြေထောက်ပေါ်သူတို့ရပ်တည်နို်င်အောင် တနိုင်လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်တဲ့ မှိုစိုက်ပျိုးရေး၊ကြက်မွေး မြူရေး လုပ်ငန်းတွေ၊ ဆိုက်ကားတွေ နဲ့အမျိုးသမီးကျောင်း မှာ ဆို စက်ချုပ်လုပ်ငန်း၊ စသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နို်င်အောင် မ တည် ပေးပါတယ်။
မြန်မာစကားမယ်… “ဟင်းစား” နဲ့ “ကွန်ချက်ပြ” ဆိုတာရှိတယ်…
ကွန်ချက်ပြတာကျတော့.. ငါးဖမ်းပုံဖမ်းနည်း.. နေရာအနေအထားတွေသင်ပေးလိုက်တာ….
မစုဉာဏ် – လွမ်းနေကြပါတယ် ဆိုတာလေး တံခါးလာခေါက်တာပါ။